पोखरामा कर सङ्कलन शुरु « Lokpath
२०७५, १४ कार्तिक बुधबार १०:४०
पोखरामा कर सङ्कलन शुरु
प्रकाशित मिति : २०७५, १४ कार्तिक बुधबार १०:४०
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले नयाँ कार्यविधि अनुसार ३३ वटै वडा कार्यालयबाट पनि कर सङ्कलन शुरु गरेको छ । एकीकृत सम्पत्तिको नाममा उच्च अदालत पोखराले कर नउठाउन आदेश जारी गरेपछि महानगरले सम्पत्ति कर तथा भूमि व्यवस्थापन कर शीर्षकमा महानगर र वडा कार्यालयबाट कर सङ्कलन शुरु गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिका राजश्व शाखा प्रमुख छवि शर्माका अनुसार साविक लेखनाथमा पर्ने वडा नं २७, २९,३०, ३१ बाट कर सङ्कलन शुरु भएको छ । उनका अनुसार वडा नं ५, ६, ७, ८, १०, १३, १५, १७ मा पनि सम्पत्ति कर तथा भूमि व्यवस्थापन कर, घर नक्साको राजश्वलगायत सबै कर तिर्न सकिनेछ ।
महानगरपालिका कार्यालयमा कर सङ्कलन हुँदा जनतालाई कष्टकर हुनुको साथै बढी भीड हुने गरेको कारण सर्वसाधारणले जुनसुकै वडामा राजश्व बुझाउने व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले वडा नं १,२,३,४,११ र १६ नम्बर वडामा बुधबारदेखि कर सङ्कलन शुरु गरिने जानकारी दिए ।
पहिले नै भएको एकीकृत सम्पत्ति करका केही बुँदा संशोधन गरेर नयाँ कार्य्विधि पारित गरी महानगरले कर सङ्कलन शुरु गरेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल बताउनुहुन्छ ।
असोज महीनाको ५ गते राजपत्रमा कर सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि प्रकाशित भएपछि महानगरले कर सङ्कलन शुरु गरेको हो ।
कर र राजस्वसम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्दै महासंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर तथा राजस्व समिति विस्तार गरेको छ
नेप्सेमा दोहोरो अंकको वृद्धि, बजार पूँजीकरण ३२ खर्ब ८७ अर्ब
काठमाडौं । हरेक दिन नयाँ–नयाँ रकर्ड कायम गर्दै अगाडि बढेको धितोपत्र बजारमा शेयर
विवाहको खर्च कटाएर रंगशाला निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । एक नवविवाहित जोडीले आफ्नो विवाहको खर्च कटौती गरी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट
के हो आरटिजिएस प्रणाली ? फराकिलो बन्दै यसको दायरा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस) प्रणालीको दायरा फराकिलो
मंगलवार कस्तो छ तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल
परिवर्तन ल्याएका मार्क्सका पाँच भनाइ
अचानक हेण्डपम्पबाट निस्किन थाल्यो मासु र रगत !
मानिसलाई नोट गन्न सघाउँदै स्मार्ट भैँसी (भिडियो)
बन्यो बिना पाङ्ग्राको फलोटिङ्ग ट्रेन, स्पीड प्रतिघण्टा ६२० किलोमिटर
यी महान भनाइ पढेपछि एक पटक सोच्न बाध्य
निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति माधवकुमार नेपालको प्रतिक्रिया यस्तो
रातमा निन्द्रा लागेन ? अपनाउनुहोस् यी उपाय, कुन
अर्बपति विनोद चौधरीको एनसीसीमा 'ईन्ट्री' : नबिल सँगसँगै